Phupha ngeRevolver Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha Malunga noMvukeli. Kuyo yonke imbali, uninzi lweengcali zizinikele kwinxalenye yezifundo zazo ekucaciseni intsingiselo yamaphupha. Owokuqala ukuzinikezela koku yayinguSigmund Freud, kwincwadi yakhe ethi "Ingcaciso yamaphupha", apho waqukumbela ukuba iimvakalelo ezifihlakeleyo zibonakaliswa ngexesha lamaphupha. Qhubeka ufunda eli nqaku ukuze ufunde ngakumbi ngalo mbandela.
Ivolovolo ngompu apho iikhatriji zicwangciswe ngesangqa kumagumbi awahlukeneyo egubu elijikelezayo. EJamani, kuvunyelwe kuphela ukuphatha umpu kunye nelayisensi esemthethweni yemipu. Nangona kunjalo, izixhobo ezinjengevolovolo zihlala ziphela kwizandla ezingagunyaziswanga kwaye, kwimeko embi, unobangela ukufa yabantu abamsulwa.
Kwa into yokuba umntu asikhombe ngompu isinika ukugodola kwaye ukubetha kwentliziyo yethu kuyenyuka. Kwilizwe lethu lamaphupha, umfanekiso "wevolovolo" ungabonakala uyinyani. Ke mhlawumbi sivuka simanzi ngumbilo ngalo mzuzu xa umpu omkhulu uqhekeza ukuthula kwaye kuqala ujonge iintliziyo zethu ezibethayo ukuba ngenene ikhona imbumbulu kuthi.
Ke kuthetha ntoni umfanekiso wephupha "ivolovolo"? Ngaba kunokwenzeka ukuba wena ngokwakho utyekele kubundlobongela?
1 Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "ivolovolo" inokuqondwa njengesilumkiso sokungafuni ukunyanzela into ngayo nayiphi na indleko. Mhlawumbi ukuphupha ivolovolo kuthetha ukuxelela iphupha ukuba ngamanye amaxesha kungcono ukwamkela izinto njengoko zinjalo. Ingamenzakalisa nokuba abe nenkani kakhulu ukuze angabanjwa.
Enye indlela yokutolika ivolovolo ibona okwahlukileyo. Oko kukuthi, umntu ochaphazelekayo bonisa amabhongo, usenokuba sele uyifezekisile injongo yakho kwaye wenze ukuba iminqweno yakho izaliseke. Iimpawu ezisele zephupha zithatha isigqibo sokutolikwa kompu - zama ukuzikhumbula nokuzitolika ngokunjalo, ukwazi ukuba ekugqibeleni ithetha ntoni ivolovolo.
Isilumkiso sikwacetyiswa ukuba umntu uphuphe ephupha kwaye woyikisa omnye umntu nge-Colt - ngokuhlangeneyo ekwabizwa ngokuba yi »revolver», oku kungabonisa umba obalulekileyo.
Ukuba udubula omnye umntu ngompu, oku kufanele ukuba kuqondwe njengophawu lokuba abanye banamandla kwaye izicwangciso zakho zisenokungaphumeleli. Ukudubula umntu ephupheni kunokuthetha ukuba, ngokwenkcazo yamaphupha, ukuba umntu uphethe ubundlongondlongo kunye nomsindo.
Ukuba umthandi wentombazana encinci uphethe ivolovolo ephupheni, abaphenyi bephupha bakubona oku njengesiqhelo sokuba kungekudala angabuphelisa ubudlelwane kunye naye ebomini bokwenyani.
Ukuba wena ngokwakho uhlaselwa kwaye usongelwa ngompu, kunokubakho isoyikiso sokwenyani esivela kumntu onogonyamelo ebomini. Ukuba kubulawe nokuba omnye ngembumbulu ephupheni, kunokubakho umntu ngaphakathi el mundo Ngokwenene uzama ukwenzakalisa umphuphi. Ukusasaza amarhe kunye nokuhleba yenye yazo. Qaphela!
Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu ukhokelwa ziindlela ezichazayo ze-psychoanalyst eyaziwayo uSigmund Freud, izixhobo ezibandakanya, njengompu, intsingiselo zesondo.
Ukuba uzama ukudubula umpu onjalo ephupheni, kodwa iikhatriji zilahlekile okanye ukuxinana kwemithwalo ngenxa yesinye isizathu, umntu ekubhekiswa kuye ukhathazwa kukoyika ukusilela kwinqanaba lezesondo kwiimeko ezininzi. Apha kubalulekile ukuba ujongane noloyiko ukuze ekugqibeleni ubasuse kwaye uzithembe ngakumbi.
Kwinguqulelo yengqondo yamaphupha, ivolovolo nayo ingangcaciso ukongama. Oku kuhlala kuthetha ukuba umntu ekuthethwa ngaye uziva enganqabisekanga ngaphakathi. Kodwa uyafuna ukukufihla oku kwabanye kwaye ngenxa yoko uthambekele kwizenzo ezigabadeleyo ngamanye amaxesha.
Mhlawumbi ndiza kulisebenzisa eli phupha njengethuba zithandabuze ukuya ezantsi. Mhlawumbi bekukho iimeko ezidlulileyo apho umntu waziva engenamandla kwaye ngoku, esoyika ukwenzakala ngakumbi, akukho mntu ufuna ukunika nabani na umbono womphefumlo obuthathaka osemva kwegobolondo ebonakala ilukhuni.
Uphawu lwephupha «ivolovolo» - ukutolika kokomoya
Ivolovolo ihlala ibeka umntu kwinqanaba lokomoya amandla eyindoda. Lowo uphuphayo, nokuba yindoda okanye ibhinqa, kufuneka ayazi ngakumbi le nto.